Izindawo Zokuzijabulisa Ohambweni Lakho Lokuzitholela | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Izindawo Zokuzijabulisa Ohambweni Lakho Lokuzitholela
(Kugcine ukubuyekezwa On: 18/06/2021)
Ukuhlela uhambo olulodwa kungaba matasa ngisho nakumhambi onolwazi, ikakhulukazi uma kuziwa ekukhetheni indawo efanele yokuvakasha nemisebenzi efanele ukubamba iqhaza lapho ulapho. Kepha okubaluleke kakhulu, ngoba ufuna ukwenza okungcono kakhulu kokuzitholela ukutholwa.
Ukuba wedwa emgwaqeni kukuvumela ukuthi uvakashele noma yikuphi lapho ufuna khona nganoma yisiphi isikhathi ofuna ngaso, ngaphandle kokuhambisana nesheduli yomunye umuntu. Futhi, ungaziphonsela inselelo ngokwengeziwe ngokuba phakathi kwabantu ongabazi nhlobo, okhulisa ukuzethemba kwakho, futhi yebo, ukuzikhulisa.
Lokho sekushilo, ingabe unayo indawo oya kuyo ohambweni lwakho lokuzitholela? Lo mbhalo uqokomisa 7 yezindawo ezimnandi kakhulu ukuvakashela uwedwa.
1. Izindawo Zokuvakashela Ohambweni Lakho Lokuzitholela: Australia
I-Australia iyindawo yokuphupha yabatshuzi abaningi ngenxa yayo amathuba okudilika angapheli Kokubili kwabatshuzi abancane nabanolwazi. Futhi noma ungakulungele ukutshuza, uzoba nesikhathi esihle sokuthola amagugu amaningi afihliwe izwe okufanele linikele ngawo. I-Australia nayo iyikhaya labashabalali kakhulu noma izinhlobo zezilwane ezisengozini yokuqothulwa, ngakho-ke uzoba nethuba elingandile lokuxhumana nezinsalela ezineminyaka eyizigidi eziseduze.
Kepha awekho kula maqiniso ashiwo okuyisona sizathundodana kungani sibeke i-Australia njengendawo ehamba phambili yabahambi bodwa. Izizathu ezimqoka ukuthula kwaphakade kwezwe, onokwethenjelwa ezokuthutha zomphakathi, nezinketho zokuhlala ezishibhile. Uzophepha kakhulu e-Australia.
Isiko lapha licebile nokudla kumnandi, ngakho-ke uzoba namathani wokudla nezinto ezihlobene namasiko ozozihlola futhi uzifunde kubantu bendawo uma uzoba nesikhathi sokugcina. Izindawo zokuhlala nezokuhamba ziyabiza kakhulu lapha, ingasaphathwa indlela efinyeleleka ngayo Bangkok kuvela kuwo wonke amagumbi omhlaba. Futhi uma ingqondo yakho ikhathazekile noma ikhathazekile, ungahlala ungene ethempelini noma esikhungweni sokuzindla futhi uzindle.
3. Izindawo Zokuvakashela Ohambweni Lakho Lokuzitholela: England
Iminyaka embalwa emuva, ILondon kwakuyidolobha elivame kakhulu ukuvakasha emhlabeni ngabavakashi abangabodwana. Lokho nje kukodwa kufanele kukutshele ukuthi le yindawo ephephile okufanele ube kuyo uma ungenayo inkampani. Isigodlo saseBuckingham okwamanje ukuheha okukhulu kwabahambi bodwa, kodwa akuyona yodwa eLondon. Uma ufuna ukubona okuhehayo kakhulu ngesikhathi esilinganiselwe, vele ujoyine iLondon uhambo lokuhamba mahhala lapho uvakashela idolobha ngokuzayo.
4. E-New Zealand
Ingabe uyakujabulela ukushayela wedwa amabanga amade? Abahambi abaningi bodwa bathanda iNew Zealand nge izinketho zokushayela kuyavumelana nabo. Konke okudingayo ukuqasha i-camper noma imoto ejwayelekile bese uya lapho imigwaqo ikuthatha khona. Lokhu yi zwe elihle ukuhlola. Abantu bendawo futhi bayemukela kakhulu futhi bayasiza noma nini lapho ufuna usizo.
5. Izindawo Zokuvakashela Ohambweni Lakho Lokuzitholela: Peru
Cishe zonke izindawo ezintsha lapho ukuvakasha kwakho kukhethekile ngezizathu ezithile, kepha iPeru ingelinye lamazwe avele avelele. Le ndawo imangaze abantu abaningi ngobuhle bayo bemvelo kanye namagugu ayo, ukuthi abantu abakwazi ukumane bakuthole ngokwanele. Its umlando ocebile, izintaba, namasiko esintu, ezithakazelisa kuzo zonke izivakashi. Ngakho, ukuzwa wonke amagugu alo esizwe, thatha uhambo lwasePeru, futhi ujwayelene nezwe.
I-US yehlukile, ngakho-ke awusoze wazizwa ungekho endaweni noma ngabe uvelaphi. Izwe nalo likhulu kakhulu futhi linakho konke okudingayo ukuze kube izintaba, amapaki, izilwane zasendle, noma amabhishi. Ukukhuluma ngamabhishi, kufanele uvakashele eFlorida ngesikhathi esizayo lapho use-USA bese ubhukuda esihlabathini esimhlophe. Ngaphezu kwalokho, Disney kungenzeka kube indawo efanelekile ohambweni lwakho lokuzikhulisa njengoba kuzokubuyisela emuva ukukhumbula ubuntwana bakho, futhi i-nostalgia encane ebabayo ayizange ilimaze muntu. Futhi uma okudingayo isikhathi esithile sokuthula wedwa, ungahlala uhlala ku- ukuqashwa kwamaholide kude nezixuku.
7. Izindawo Zokuvakashela Ohambweni Lakho Lokuzitholela: Japan
IJapan ingamakhilomitha amaningi kunamanye amazwe maqondana nobuchwepheshe. Uma ungumuntu we-tech futurist noma umtshali-zimali, Ukuhlola amathuba ebhizinisi leli dolobha elinalo kuzokujabulisa. Izwe libuye libe namathempeli amahle, amahhotela aphezulu, nezindawo zokudlela, kanye nengcebo yemvelo efihlwe kakhulu yase-Asia. Yini enye, amasistimu ezokuthutha asebenza kahle lapha azokwenza uhambo lwakho lodwa lube mnandi futhi lungabi nankinga. Uma ungumthandi womculo, ungaletha i-laptop yakho ne isoftware yokwenza umculo ukuvumela ugqozi lukushaye futhi mhlawumbe ukhiqize imisindo ethile enhle ukufanekisela uhambo lwakho wedwa.
Kunezinto eziningi okufanele uzenze futhi ufunde eMalaysia, kodwa iqiniso elithakazelisa kakhulu ngaleli lizwe eliseningizimu-mpumalanga ye-Asia ukuthi inani elikhulu labantu likhuluma isiNgisi. Lokho kusho ukuthi ngeke ulahlekelwe yindlela yakho lapho uhamba wedwa lapha. Izwe linamabhishi, izintaba, izindawo zokuntywila, nakho konke okudingayo ukuze uphumule futhi ujabulele impilo uwedwa.
Ukuhlehlisa ubhaka nokuhamba wedwa kuyaduma ngosuku ngenxa yokuba bhetyebhetye abakususayo. Wenza okulungile. Khumbula nje ukuthi ube nesabelomali esanele sendawo yakho yokuhlala, ukudla, nezidingo zezokuthutha ngoba kufanele uzimele uma uzokuthokozela ukuhamba kwakho kokuzitholela.
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza uhlele izindawo zakho ezijabulisayo zokuvakashela kuhambo lwakho lokuzitholela ngesitimela.
Ingabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu elithi “Izindawo Ezijabulisayo Zokuvakashela Kuhambo Lwakho Lokuzitholela” kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fzu%2Ffun-places-visit-self-discovery-trip%2F- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
discovery FunPlaces SelfDiscoveryTrip SoloUkuvakasha